Ubugcisa bodonga lwentsimbi yealuminiyam luya ngokuya luduma, kwaye abantu abaninzi bagqiba kwelokuba baphucule igumbi labo lokutyela, amagumbi okuhlala, njl njl. Awunakho nokucinga ukuba zingaphi izinto ezipholileyo ezinokwenziwa ngealuminium. Ingaba ngumhlobiso omncinci okanye ubugcisa obukhulu bodonga, obu ...
Ubugcisa bodonga lwensimbi ye-3D
I-Aluminium yenye yezona zinto zidumileyo ezisetyenziswayo phantse kuzo zonke izinto zangoku zokuhombisa zobugcisa ekhaya. IAluminiyam ineepropathi ezininzi ezinegalelo ekusetyenzisweni kwendalo kunye nomhombiso wasekhaya. Enye yezinto ezinokubakho zizinto ezibalaseleyo zobugcisa bodonga lwensimbi lwe-3D, enokuba yingqangi ...
Iwotshi yentsimbi yodonga enamacala amathathu yanamhlanje
Njengoko ixesha lihamba, ngoku iiwotshi ayisiyiyo eyokusebenza kuphela, ngapha koko, kuyo yonke indawo ojika kuyo kukho iselfowuni okanye ikhompyuter ebonisa ngokucacileyo ixesha elichanekileyo. Iiwotshi eziboniswe kule post nganye zizisa uhlobo olwahlukileyo kuhlobo Ezi wotshi zodonga ziwotshi zi ...
Ukusebenza kwewotshi yodonga lwensimbi oluvela kumenzi wasekhaya mhle
Le wotshi inemibala eqaqambileyo nenombala odongeni ayijongwa nje kakuhle ixhonywe eludongeni, kodwa ikwindawo ethe tyaba kwaye ethe cwaka nayo. Ukuba awuzithandi iiwotshi ezikhawulezayo zokukhawulela, yile wotshi efanelekileyo kuwe, njengoko inomboniso 'wentshukumo yokunyathela ethe cwaka.' Iiyure kunye nemizuzu ...
Ubugcisa bodonga lwentsimbi bale mihla
Ngaba kukho udonga olungenanto ekhayeni lakho ukuba luhonjiswe? Ukuba awukho emva kwepeyinti epeyintiweyo okanye igalari yezithombe, jonga uhombiso lodonga lwentsimbi oluqokelelweyo lwam ngezantsi. Yenye into enomdla eguqula udonga olungenanto kwisitayile esikhethekileyo. Umhle, uthambile ubugcisa bentsimbi eluhlaza okwesibhakabhaka. Enye ye ...
Iingcamango zedonga lesinyithi
Nokuba ujonge ngaphakathi kuyilo lobugcisa bokuyila iingcinga zegumbi elithile ekhayeni lakho, izikimu zemibala ofuna ukuzihlola, okanye ufuna nje ukuphefumlelwa kuyilo olwahlukileyo lweziqwengana zodonga lwemifanekiso enokongeza eludongeni lwakho, eli nqaku loyilo lwangaphakathi lodonga iingcebiso zenzelwe wena ....
Ubugcisa obujikeleziweyo bentsimbi
Ngenxa yokubanda okubandayo kwealuminiyam kwimizobo yethu yasekhaya, siqokelele ubugcisa bentsimbi obujikelezayo obuza kugxininisa ikhaya lakho ngendlela entsha nenomdla. Ezi ziqwenga ziyathandeka, zenziwe ngamagcisa asebenza ngetsimbi asebenza kakhulu anamava angaphezulu kweminyaka eli-10, kwaye bebe ...
Ukufikelela iKhaya lakho ngeSinyithi seDonga elihonjisiweyo
Xa ukhetha ubugcisa bodonga ekhayeni lakho, ubugcisa bentsimbi yokuhombisa kuhlala kuyinto ebalaseleyo. Iziqwenga zethu zobugcisa zodonga lwentsimbi ziza ngeendlela ezahlukeneyo kunye nezifundo, kwaye zinokusetyenziswa ngokufanelekileyo ukwenza indawo ekugxilwe kuyo ngaphakathi kulo naliphi na igumbi lekhaya lakho. Nokuba isitayile sakho sokuhombisa ...
ukupeyinta kwiipaneli zealuminium
Ukupeyinta kwialuminium? Ewe, ewe! Ukupeyinta kwiiphaneli zentsimbi, zihlala zibhedu, kuye kwabhalwa ngokwembali ukusukela ngaphambi kukaRembrandt. Kodwa kule minyaka ingama-20 idlulileyo, amagcisa ethu ebezama iipaneli ezihlanganisiweyo zealuminium, ezikhaphukhaphu kwaye zinolwakhiwo olomeleleyo oluyi-100% ...
Ukuhonjiswa kodonga lwasekhaya lwentsimbi
Ukuhombisa iindonga zakho yenye yeendlela ezikhawulezayo zokuzisa ubugcisa obuncinci ekhayeni lakho. Singenza i-décor yodonga lwesinyithi eya kuthi ilingane kakuhle kuso nasiphi na isithuba. Isicatshulwa sobugcisa esenziwe ngobunono esenziwe ngobunono se-LED sinokulikhanyisa igumbi lonke kwaye sinokubangela neengxoxo phakathi kwefri yakho ...
Ubugcisa bodonga lwentsimbi yeLotus
Njengobugcisa baseludongeni buhamba, le ndalo ipaneli ye-lotus yeentyatyambo yokudala ipeyinti iyasebenza. Iiphaneli zentsimbi ezimnyama eziluhlaza, ezilinganisa i-60cm ukuphakama, zihonjiswe ngeentyatyambo eziqaqambileyo zentyatyambo kunye nokubonakalisa. Kukho into ethandekayo yobunzulu kuyo kwaye intyatyambo ijongeka ngathi inyulu kwaye qu ...
Lihombise ikhaya lakho ngobugcisa bentsimbi eludongeni
Zininzi iindlela zokuhombisa indlu ngaphakathi. Abantu abayixabisayo eyona mgangatho ubalaseleyo, ubuhle kunye nezisombululo ezisebenzayo bahlala bejonga iziqwenga ezizodwa ezindlwini zabo. Ubugcisa bodonga lwensimbi bubonelela ngesitayile esikhethekileyo nakweliphi na igumbi. Abantu basebenzise ngokuzithandela ukugqitywa kwesinyithi kwaye ...